Dowladda Federaalka oo cambaareysay Gantaalo Xuutiyiinta ku weerareen Sacuudiga - Home somali news leader
Home NEWS Dowladda Federaalka oo cambaareysay Gantaalo Xuutiyiinta ku weerareen Sacuudiga
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay weerar gantaalo ah oo Xuutiyiinta Yemen ku qaadeen dalka Sacuudiga.
Xuutiyiinta Yemen ayaa weerarkooda u adeegsatay Gantaalada Balaastiika ah, iyadoo ku gantay dhanka Caasimadda Riyadh iyo dhowr diyaaradood oo miineysay ku jiheysay magaalooyinka Jaazaan iyo Khamiis Mushaat.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo afka Carabiga ku qornaa ayaa lagu sheegay in weerarkaas ahaa mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga, iyadoo ku tilmaamtay mid argagixiso ah.
“Soomaaliya waxa ay u aragtaa weerarkaasi mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga iyo kan bani’aadamnimada iyo dambi argagixiso oo lagu beegsanayay goobo dad rayid ah ay degan yihiin iyo carqalad ka dhan ah dadaallada Qaramada Midoobay ee lagu doonayo in lagu gaaro xal siyaasadeed oo dhammaystiran oo lagu soo afjaro colaadda Yemen”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Sidoo kale waxaa war saxaafadeedka lagu caddeeyay inay si dhammaystiran u garab taagan tahay Boqortooyada Sacuudi Carabiya, ayna ku taageersan tahay dhammaan tallaabooyinka ay u qaadayso difaaca ciiddeeda, kuna sugayso amnigeeda ,bedqabka muwaadiniinteeda iyo dadka degganba, iyadoo ka hortagaysa col kasta oo dhagar huwan.
Previous articleCumar C/rashiid “Marxalada uu dalku marayo waa tii ugu xumeyd ee soo marta Soomaaliya”
Next articleMacron’s “direct democracy” is being tested as the citizens’ panel on climate change